Merchandiser (150,000 MMK+++) Code-12294
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင်ရှိသော အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများကို Trading လုပ်သော Company ကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် (သို့)တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
– သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ.အကြုံ (၁) နှစ်ဝန်းကျင်ရှိရမည်။
– အသက် (၂၀) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
Job Categories: Merchandising & Purchasing. Job Types: Full-Time. Job Tags: merchandiser. Salary: 100,000 - 300,000. 80 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ